Goon hilib hilib dubatay oo baradho leh | Cunnooyinka jikada
Brisket hilib dubay oo leh baradho
Maria vazquez | | Suxuunta, Cunnooyinka Hilibka
La Goonyaha Hilibka waa cunno fudud oo dhadhan fiican leh. Waxaa loo karin karaa siyaabo badan, waa la kariyey, waa la kariyey, waa la dubay ... Markan waxaan ku karineynaa foornada oo waxaan ku wehelinaa baradhada la jarjaray si kuwa yaryar iyo kuwa aan badneyn, ay ugu muuqdaan kuwo soo jiidasho leh.
Cuntadani waa mid aad u fudud, labadaba diyaarinta iyo maaddooyinka. Kaliya waa inaad ka walwashaa inaad iibsato gogo 'veal oo wanaagsan, gabal weyn oo laftiisu u oggolaatay dubista Dhowr xabo oo toon ah, geedo yaryar oo udgoon iyo cabitaanno ah ayaa sameyn doona inta hartay a casiir dhadhan fiican leh taas oo lagu rusheeyo rootiga.
Baashaalka digaagdu waa hilib dhadhan fiican oo aan qaali ahayn. Cunto fudud oo aan wehelino xoogaa baradho ah.
Waqtiga karinta: 1 pm
2 kg oo gogo 'hilib lo' ah
4 oo toon ah oo toon ah
1 caleen caleen ah
1 koob oo khamri cad ah
1 xabbo oo maraq hilib ah + biyo
Hilibka ku kari.
In dhalada isku qasan ilkaha ayaanu shiidnaa toon, cube kaydka iyo khamriga cad.
Waxaan ku fidinay weel wax lagu dubo saliid saytuun ah. Waxaan dhigeynaa qaybo ka mid ah gogosha hilibka lo'da cusbaynaya oo ku dar rosemary, caleen caleen iyo basbaas xoogaa.
Waxaan sidoo kale ku darnaa jajabka iyo biyo ilaa laga daboolayo qayb ka mid ah hilibka.
Waxaan ku dhejinay foornada kuleylka ah 180-200º 30 daqiiqo. Waqtigaas kadib waan soo jeesanaynaa hilibka kuna dar biyo yar haddii loo baahdo. Waxaan kariyeynaa 30-40 daqiiqo oo dheeri ah.
Halka, waxaan yareyney baradhada la jarjaray oo lagu shiilay shiil qoto dheer. Waxaan ku darnaa saxanka dubista daqiiqadihii ugu dambeeyay.
Waxaan u adeegnaa kuleyl.
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Suxuunta » Cunnooyinka Hilibka » Brisket hilib dubay oo leh baradho
Pear iyo salad farmaajo oo caano fadhi leh
Hilibka lo'da Shiinaha iyo bariiska baastada ah